Furayaasha Logitech MX iyo MX Master 3, oo ku dhowaanaya dhammaystir | Waxaan ka socdaa mac
Furayaasha Logitech MX iyo MX Master 3, oo ku sii dhowaanaya dhammaystirka
Waxaan ku tijaabinay labada shey ee cusub ee loo yaqaan 'Logitech' ee loogu talagalay Mac-yadayada: Kumbuyuutarka furaha MX iyo jiirka MX Master 3, laba shey oo loo aasaasay inay yihiin tixraaca suuqa iyo badeecadaha lagu garaaco nooc kasta, dejinta baarka moh sare. Tayada, raaxada iyo astaamaha horumarsan ee aan ka wada hadalno hoos.
Mideynta Logitech iyo teebabka iyo jiirka kombiyuutaradayada aad ayey u xoogan yihiin waxayna u muuqataa inay adag tahay in laga fikiro kumbuyuutar ama jiir isla markaana aan si toos ah looga fekerin nooca caanka ah. Iyagu waa sannado khibrad u leh qaybtan, kuwaas oo ka muuqda wax soo saarkooda, sii kordhaya sii hufan iyo hawlo aan si dhib yar lagu qiyaasi karin dhawr sano ka hor.. Kiiboodhka cusub ee MX Keys iyo MX Master 3 jiirka ayaa ah noocyada cusub ee la siidaynayo ee ku soo dhowaanaya si kaamil ah.
1 Kiiboodhka MX Furayaasha
3 Ikhtiyaariyada 'Logitech Options', waa software-ka xidha goobada
Kiiboodhka MX Furayaasha
Haddii kiiboodhka Logitech Farshaxanka (kaas oo aan hore uga soo hadalnay tan isku xirka) waad jeceshahay, laakiin qiimaheedu wuxuu umuuqday mid aad u sareeya (in kastoo uu uqalmo), furayaashan 'Logitech MX' Furayaashu waa wixii aad raadineysay. Dhaxalsugaha nashqadeynta iyo qalabka walaalkiis ka weyn, Bixinta leh giraangiraha shaqada ee astaamaha iyo soo noqoshada waxay na siinaysaa qiimo aad u soo jiidasho badan kuwa aan wax badan ka heli doonin muuqaalkaas Farsamada. Laakiin Logitech ma uusan dooneynin inuu hoos u dhigo hal iota inta ka hartay astaamaha, wuxuuna na siinayaa kumbuyuutar qiimo sare leh oo ah 100%.
Sannad iyo badh ka dib anigoo isticmaalaya farshaxanka 'Logitech Craft' maalin kasta aniga oo leh 'iMac', ma aanan dareemin farqiga ugu yar ee leh Furayaasha MX. Kiiboodhka ayaa si aad ah ugu raaxeysan in la isticmaalo, aad u deggan miiska Waad ku mahadsan tahay naqshadooda macdanta ah iyo dusha sare ee taageerada, furayaashu waa cabbir caadi ah, isku soo duudduuban oo leh safar yar laakiin ku filan si ay u helaan dareen wanaagsan marka wax la qorayo Kiiboodh buuxa oo leh kumbuyuutar lambar, calaamado buuxa, iyo fureyaal dheeri ah oo kaa caawinaya inaad wax ku qabato si dhakhso leh. Waxay ku habboon tahay Windows iyo macOS, oo leh dhammaan furayaasha nidaam kasta.
Waa kumbuyuutar Bluetooth ah, laakiin sidoo kale wuxuu ku shaqeyn karaa iyada oo loo marayo nidaamka mideynta Logitech iyada oo ay ugu mahadcelineyso adabtarada USB-ga ah. Waxaan kugula talinayaa habkan labaad ee isku xirka, waa mid xasiloon oo i siinaya dareenka ah in batterigu sii soconayo xitaa waqti dheer, ugu yaraan waqtiga aan adeegsaday Farsamada Logitech. Adiga oo adeegsanaya labada hab midkood waxaad isku xiri kartaa ilaa seddex aaladood oo ay ugu mahadcelinayaan saddexda xusuus, iyo kala beddelka dhexdooda waa arrin riixaya badhan, si dhakhso leh oo fudud. Haddii aad inta badan ku isticmaasho iPad-kaaga ama MacBook-gaaga iMac-gaaga, waxaad u isticmaali kartaa isla kumbuyuutarka aaladaha oo dhan.
Muuqaal kale oo ka mid ah kumbuyuutarkan ayaa ah nalka dambe, oo la isku hagaajin karo xoogiisa (aan ahayn midabka), iyo dareemayaal ka dhigaya inuu hawlgalo oo keliya markii loo baahdo, sidaasna ku sii dheereynaya nolosha batteriga. Waxaa lagu hagaajin karaa si xoog leh gacanta, iyo waa wax lagu farxo in la arko sida wanaagsan ee dareemayaasha kumbuyuutarku u shaqeeyaan, kaliya adoo isku soo dhoweeya gacmahaaga waxay kicinayaan iftiinka furayaasha, iyada oo aan xitaa loo baahnayn in lagu cadaadiyo. Mar alla markii aad isku daydo kumbuyuutar gadaal gadaal ka gala, mar dambe ma fahmi doontid sidaad horay u ahaan lahayd la'aantood, waa macquul in Apple uusan ku darin kumbuyuutarradeeda.
Dib u soo buuxinta kumbuyuutarka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo fiilada USB-C, oo lagu soo daray sanduuqa. Waxay leedahay ismaamul qiyaastii 10 maalmood ah oo leh "caadi ah" isticmaalka iyo iftiinka dambe ee firfircoon, kiiskeyga waxaan dhihi lahaa wax kale, maxaa yeelay waxaa jira maalmo aanan isticmaalin, in kasta oo aanan waligey damin shidalka loo heli karo. Kiiboodhku si otomaatig ah ayuu u galayaa habka tamarta yar marka aan la istcimaalin in muddo ah, wuxuuna toos u kiciyaa isla marka aad taabato furaha. Haddii aad furtid iftiinka dambe, is-maamulku waa illaa 5 bilood sida uu qabo Logitech, wax aanan hubin.
MX Master 3 jiirku waa kaamil ku ah kumbuyuutarka, ama la’aantiis. Si fudud ayey ufiican tahay waana calaamadda sumadda ee sumadda. Ka dib in ka badan hal sano anigoo adeegsanaya MX Master 2S kuma hadli karo wax ka badan waxyaabaha cajiibka ah ee jiirkan quruxda badan, dhaxalkiisana wuxuu dhaxlaa kan ugu fiican wuxuuna hagaajiyaa dhinacyada qaarkood. Ergonomics, raaxada isticmaalka, isku halaynta, habeyn, agab qiimo leh iyo helitaanka howlo fara badan oo dhaqso leh… Waxaan ka fekeri karaa oo keliya hal dhibaato oo jiirkan ah: waxay ku beddeleen tilmaamayaasha tilmaamayaasha LED-yada hal LED oo aan ku tusin qadarka batteriga hadhay. Inta kale, maxaa la yiri: waa hagaagsan yahay.
Logitech waxyar ayuu ka beddelay naqshadda jiirka kii ka horreeyay si loo hagaajiyo ergonomics, iyo waxay gaadhay meel aad u raaxo badan oo gacan ah, taas oo ay gacan ka gaysatay qaabayn cusub oo badhamada dhinaca ah, aadna loo heli karo, hagaajinta isticmaalkeeda. Haddii aad u baratay jiir caadi ah oo laba-badhan ah, inaad aragto jiir fara badan oo koontarool ah ayaa laga yaabaa inay keento shaki, laakiin waad la qabsanaysaa iyaga wax ka yar maalin isticmaalkeeda. Labadiisa giraangirood iyo badhano fara badan ayaa si istiraatiiji ah loo dhigay si isticmaalkeedu u noqdo mid aad u macquul ah, awood u lahaanshaha inaad habeyso kontaroolada ayaa kuu ogolaanaya inaad dhigto wax kasta oo aad u aragto inay ku habboon yihiin.
Xusuus gaar ah wuxuu mudan yahay giraangiraha ugu muhiimsan, oo ka samaysan bir bir ah iyo jilicsanaanta isticmaalkeeda taas oo kaa dhigaysa inaad necbaato jiir kasta oo kale oo aad soo qaadato. Nidaamkeeda «Magspeed» wuxuu kaa dhigayaa inaad yeelato dhaqdhaqaaq qurux badan oo habsami leh markaad si tartiib ah ama dhakhso leh u ballaadhinayso markaad dhaqso u rogayso. Magnetka ayaa xukuma wareegga giraangirta waxayna kuxirantahay xoogga aad ku dalbato wareegga, way ogaan doontaa sida aad u rabto inaad u dhaqaaqdo. Batoonka kor ku xusan ee shaaggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gacanta ku bedesho nidaamka, laakiin dhab ahaantii anigu ma isticmaalo gabi ahaanba, nidaamka otomaatiga ah ayaa si weyn u shaqeeya.
Badhamada muhiimka ah aad ayey ugu jilicsan yihiin taabashada, laakiin si khalad ah uma cadaadin doontid. Giraangiraha duubku wuxuu ku dhacayaa suulkaaga, si dhaqso ahna waad ula qabsaneysaa, isla markaaba ma heysid adigoon haysan. Kaliya hoosta waxaa ku yaal laba badhan oo dheeri ah oo lagu hagaajin karo howlaha aad rabto. Haddii tani u muuqato inaysan ku filneyn, waxaa jira badhan kale oo ku yaal tabka jiirka ee jiirka oo waliba la beddeli karo. Kuwa aan waligood isticmaalin jiir noocan ah, waxaa laga yaabaa inay la yaab ku tahay inay u habeeyaan hawlo badan oo jiir ah, inay had iyo jeer u adeegto oo keliya inay tilmaamto. Qaybta xigta ee falanqaynta waxaad arki kartaa sida loo qaabeeyey iyo sababta ay u tahay wax ka dhigaya MX Master 3 kan jiirka ugu fiican suuqa.
Mouse isku xirnaanta waxay lamid tahay kiiboodhka wehelka, hal aalad Uniting oo kujirta USB-ga kombiyuutarkaaga ayaa sameyn doona kumbuyuutarka iyo jiirka, ama waxaad isticmaali kartaa Bluetooth. Waxay leedahay saddex xusuusood, sida kiiboodhka, iyo beddelka aaladaha waa arrin ku saabsan riixitaanka batoon ku taal salka. Qalabka 4.000 ee DPI wuxuu ku siinayaa saxnaan aad u weyn wuxuuna ka shaqeeyaa dusha sare, xitaa muraayadaha. Ku saabsan ismaamulka, waxaad ku raaxeysan kartaa jiirka 70 maalmoodHadana hadii batteriga kaa dhamaado, xasiloonida maskaxda maxaa yeelay marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad ku isticmaasho fiilada lacag bixinta ee ku xiran, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa 3 saacadood kaliya hal daqiiqo oo lacag bixin ah. By the way, Logitech wuxuu ku daray USB-C si uu uga qaado MX Master 3, wax ka duwan qaabkii hore oo la mahadiyo.
Ikhtiyaariyada 'Logitech Options', waa software-ka xidha goobada
Qalabka wanaagsan ma ahan wax walba, Logitech-na wuu ogyahay in alaabteeda ugu fiican ay tahay inuu la socdo softiweeriyada qaabeynta si ay isugu dhigmaan App-ka 'Logitech Options' wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isku koobto dhammaan ficilada badhannada "gaarka ah" ee ku yaal MX Master 3 jiirka iyo MX Keywords. U adeegso shaashadda wareejinta si aad u dhaweyso, badhamada dhinaca si aad u rogto ficilada ama aad u qaadatid shaashadaha shaashadda, u dhexeyso miisaska kumbuyuutarrada ... tayada xulashooyinka lagu soo bandhigo barnaamijkan ayaa ah mid la yaab leh, oo xitaa waad isku habeyn kartaa xulashooyin kala duwan iyadoo ku xiran barnaamijka aad ku jirto. . Sidan ayaad awoodi doontaa inaad ku qabato shaqooyinka qaarkood Final Cut Pro iyo kuwa kale oo kala duwan oo ku jira Ereyga. 'Duolink' waxaad ku ballaarin kartaa howlaha jiirkaaga adigoo riixaya furaha Fn ee kumbuyuutarkaaga, oo Logitech Flow waxaad ku wareejin kartaa feylasha kombiyuutarada. Oo markaa inaadan lumin isku-darkaaga markaad wax walba u dhammaystirto sidaad jeceshahay, waxaad ka abuuri kartaa nuqulo nuqul ah dalabka laftiisa.
Logitech waxay abuurtay laba shey oo cusub iyadoo sifiican looga faaiideysanayay sanado badan oo khibrad sameynta teebabka iyo jiirka ah. MX Master 3 wuxuu badalay kii kahoreeyay ee "Mouse ka fiican" iyadoo kumbuyuutarka MX Keys uu ku guuleystey inuu ilaaliyo tayada Logitech Craft guuleysteed asaga oo meesha ka saaray shaashadii shaqada ee uusan qof walba isticmaalin isla markaana ku badallay kumbuyuutar aad u fiican qiimo jaban. Si gooni ah, laakiin si aad ah uga wada wanaagsan, kumbuyuutarkan iyo jiirka ayaa ah xulashada ugu fiican ee qofkasta oo raadinaya wax ka badan waxa alaabada caadiga ah ay bixiyaan..
Master-ka Logitech MX 3 .89,99 XNUMX (isku xirka)
Fureyaasha Logitech MX € 85,74 (isku xirka)
Furayaasha Logitech MX iyo MX Master 3
Raaxo iyo ergonomic
Badhamada gelitaanka degdegga ah
Feature software habeynta
Tusaha batteriga aan la adkeyn karin
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Furayaasha Logitech MX iyo MX Master 3, oo ku sii dhowaanaya dhammaystirka
Waxaan rabaa inaan ogaado halka laga iibsado saacadaas ama hadday aqriste uun tahay ...
Nooca cusub ee Ghostery Lite ayaa hadda la heli karaa
Ka hubi batariga AirPods ee Apple Watch